Faransiiska ayaa ku dhawaaqay COVID baasaboorada, makhaayadaha, tiyaatarada iyo tareenada, jabka qasabka ah ee shaqaalaha caafimaadka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » France Breaking News » Faransiiska ayaa ku dhawaaqay COVID baasaboorada, makhaayadaha, tiyaatarada iyo tareenada, jabka qasabka ah ee shaqaalaha caafimaadka
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • France Breaking News • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron
Tallaallada COVID-19 ee loogu talagalay dadweynaha guud ahaan qasab kuma noqon doonaan mustaqbalka dhow, laakiin Macron kama qaadin xulashada miiska.
Qiyaastii 36% ka mid ah 67 milyan ee reer France ayaa si buuxda looga tallaalay COVID-19.
Tallaallada COVID-19 waxay qasab ku noqon doonaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee Faransiiska.
Dawladda Faransiisku mar dambe ma bixin doonto tijaabooyin bilaash ah COVID-19 laga bilaabo dayrta.
Khudbad uu telefishanka ka jeediyay maanta, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron wuxuu ku wargaliyay muwaadiniinta Faransiiska inay u baahan yihiin in la tallaalo si ay u awoodaan inay booqdaan baararka, maqaayadaha, tiyaatarada, shineemooyinka iyo tareenada lagu raaco, iyo Covid-19 tallaalada ayaa khasab ku noqon doona shaqaalaha caafimaadka ee Faransiiska.
Sida laga soo xigtay Macron, tallaalada COVID-19 waxay qasab ku noqon doonaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee Faransiiska, iyo "baasaboor caafimaad" oo cadeynaya heerka tallaalka, ama baaritaanka diidmada ah ee loo yaqaan 'coronavirus', ayaa lagama maarmaan noqon doona in tareen la raaco ama la booqdo inta badan goobaha dadweynaha laga bilaabo Ogosto. Dhammaan muwaadiniinta Faransiiska iyo deggeneyaasha ka weyn 12 sano waxay u baahan doonaan kaar.
"Waxaan kordhin doonnaa kaarka caafimaadka inta ugu macquulsan si aan ugu riixno intiinna badan intii suurtagal ah si aad u tallaashaan," ayuu yiri Macron
Tallaallada COVID-19 ee loogu talagalay dadweynaha guud ahaan qasab kuma noqon doonaan mustaqbalka dhow, laakiin Macron kama qaadin xulashada miiska. Haddii heerarka tallaalku ay soo bixi waayaan, madaxweynaha ayaa ka digay inuu "weydiin doono su'aasha ah in tallaal khasab ah laga qaado dhammaan dadka Faransiiska ah."
Intaa waxaa sii dheer, in kasta oo baaritaanka PCR-ga ee xun uu ku filnaan doono helitaanka “kaarka caafimaadka,” Macron wuxuu sheegay in dowladdu aysan mar dambe bixin doonin baaritaannada bilaashka ah ee COVID-19 laga bilaabo dayrta iyo wixii ka dambeeya.
Qiyaastii 36% ee 67 milyan ee Faransiiska ah ayaa si buuxda looga tallaalay COVID-19, laakiin tirada kiisaska cusub ee coronavirus ayaa si isdaba joog ah u kordhayay tan iyo bilowgii bishii Luulyo, oo ay wadeen kuwa faafa. Kala duwanaanshaha Delta ee COVID-19.
Faransiisku wuxuu leeyahay "xidid" tallaalka ka-hortagga tallaalka oo ay u badan tahay inuusan aad ugu faraxsanayn tallaalka gardarrada ah ee Macron.